(tonga teto avy amin'ny Fiangonana evanjelika)
Ny Evanjelisma na Evanjelikalisma na Fiangonana ara-pilazantsara dia fihetsiketsehana kristiana milaza fa ny Filazantsara (na Evanjely) no hany fototra sy filamatry ny finoany. Niforona nanomboka tamin'ny Fanavaozam-piangonana protestanta (taonjato faha-16) io fihetsiketsehana io ka nitombo tanjaka nanomboka tamin'ny taonjato faha-18 tamin'ny nipoiran'ny Metodisma britanika sy ny Pietisma loterana. Ahita azy ny antokom-pinoana maro amin'ny Protestantisma. Isan'ny matanjaka ao amin'ireo Fiangonana evanjelika ny Batisma, ny Pentekotisma, ny Fihetsiketsehana karismatika evanjelika, ny Fihetsiketsehana karismatika vaovao (na Pentekotisma vaovao) ary ireo Kristianisma avanjelika tsy miankina. Fiangonana evanjelika na Fiangonana ara-pilazantsara no iantsoana ireo fiangonana ireo. Ny Evanjelisma dia atao hoe koa Kristianisma evanjelika na Protestantisma evanjelika na Evanjelikalisma. Ny teny hoe evanjelika dia azo soloana amin'ny hoe ara-pilazantsara amin'ny teny malagasy.
2 Fifandraisana amin'ny samy Kristiana
3 Toetra itovian'ireo Fiangonana evanjelika
4 Ireo antokom-piangonana evanjelika
4.2 Ny Pentekotisma
Ny mampiavaka azyModifier
Itovian'ny Kristiana evanjelika rehetra ny fanomezany lanja ny fiovam-po isam-batan'olona izay vokatry ny safidy manokan'ny tsirairay avy eo ny fiainana mivantana ny "fihaonana amin'i Kristy". Izany dia midika fa misy fiovam-piainana sy fihaonan'ny tsirairay amin'Andriamanitra izay mifanohy amin'ny famakiana ny Baiboly sy ny fiombonana vokatry ny vavaka isam-batan'olona na itambaran'ny be sy ny maro. Mampiavaka azy koa amin'ny protestantisma sy ny katolisisma ary ny ortodoksia ny batisan'ny mino (batisan'olon-dehibe). Ny Evanjelisma ankehitriny dia ahitana mpivavaka 285 000 000 maneran-tany (tsy voaisa ao ny Pentekotista) , ka mahefeno ny 13%n'ny Kristiana eran-tany izany.
Fifandraisana amin'ny samy KristianaModifier
Na dia vokatry ny Reformasiona protestanta aza ireo Fiangonana ara-pilazantsara îreo dia matetika lavin'ny Protestanta sasany. Izany no nahazo ny Pentekotisma nanomboka tamin'ny taona 1906 sy ny Batisma nanomboka tamin'ny taona 1609. Amin'ireo mpanohitra azy dia fiangonana mitandrina firehana teolojika tranainy loatra izy ireo. Ny tena fondamentalista, îzany hoe mpanao fivoasana ara-bakiteny ny Baiboly, dia ireo ao amin'ny International Council of Christian Churchs ("Fiombonan'ny fiangonana kristiana iraisam-pirenena") izay niorina tamin'ny taona 1948 ary ahitana ireo fiangonana tsy mivelatra loatra amin'ny hafa sady milaza ny tenany ho tsy miditra amin'ny raharaha misy resaka politika. Io fiombonana io anefa dia nanohitra mafy ny komonisma tamin'ny fotoana nifanoheran'ny vondron-tany kapitalista sy komonista. Mandà tanteraka ny fifanatonanan'ny fiangonana tsy mitovy firehana aminy izy ireo.
Maro ireo Fiangonana ara-pilazantsara izay tsy nanapaka ny fifandraisany amin'ny Conseil Œcuménique des Eglises ("Fiombonana Ekiomenikan'ny Fiangonana"), na dia tsikerainy ho goragora loatra ireo fiangonana mikambana ao amin'io fiombonana io sady ataony hoe manorina ny fiombonany amin'ny resaka fitondram-piangonana fotsiny. Mihevitra izy ireo fa ny asa iaraha-manao dia tokony hifandanja amin'ny fifanarahan'ny fampianaram-pinoana niaraha-nanatontosa. Afaka miditra amina raharaha ara-politika mahakasika ny ara-tsosialy izy ireo raha toa ka tsy hampifangaroharo zavatra izany.
Isan'ny manam-pifandraisana ara-teolojia amin'ny Evanjelisma koa ireo Fiangonan'ny fifohazam-panahy, ny Jodaisma mesianika, ny Adventisma ary ny Fiangonan'ny mpirahalahy.
Toetra itovian'ireo Fiangonana evanjelikaModifier
Araka ny filazan'ny Conseil National des Evangéliques de France, ny finoana evanjelika dia azo fintinina amin-javatra telo izay hita koa ao amin'ny fanambaràm-pinoanan'ny Alliance Evangélique Mondiale, izay neken'izy ireo tamin'ny taona 1951  :
Ny fahateraham-baovao: miaiky ny asam-panavotan'i Kristy amin'ny alalan'ny fieken-keloka sady misafidy manokana ny hanolotra ny fiainany amin'i Jesosy mba hahazo ny fanomezam-pahasoavan'ny famonjena izay mifandray amin'ny fahateraham-baovao. Ny batisan'ny olon-dehibe anabatista dia matetika manambara izany fanapahan-kevitra izany;
Ny fijoroana vavolombelona: ny Filazantsara no vaovao mahafaly tokony ho zarain'ny Kristiana ara-pilazantsara amin'ny fianakaviany, amin'ny namany, amin'ny mpifanolo-bodirindrina aminy, amin'ny mpiara-miasa aminy ary amin'ny olona rehetra izay mety hihaona aminy, na amin'ny fiainanany andavan'andro izany na amin'ny maha mpamita iraka (misionera) azy.
Ireo zavatra telo ireo dia vokatry ny fanadihadiana nataon'ilay sosiologa britanika atao hoe Bavid Bebbington izay manampy koa ny maha ivon'ny fivavahan'ny Evanjelika ny amin'ny fanomboana an'i Jesosy Kristy tamin'ny hazo fijaliana, izay lohahevitra mitoetra mandrakariva ao amin'ireo toriteny sady heverina ho kihon-dalana teo amin'ny tantaran'ny Zanak'olombelona. Na dia izany aza dia mason-tsivana tsy dia voaray hanavahana ny Fiangonana evanjelika izany, angamba noho izy sarotra sarahina amin'ny fahatsapan'ny tsirairay.
Misy vondrom-piangonana hafa izay azo ampifanakekezina ara-teolojia na ara-tsosiolojia amin'io firehana io (ohatra amin'izany izay miseho ao amin'ny Fiangonana katolika) nefa tsy azo lazaina hoe "ara-pilazantsara", amin'ny hevitra hentitr'ilay teny izany.
ny fanadratana ambony ny fifohazam-panahy (revivalisma), izay mahafaoka ny fiheverana ho zava-dehibe ny fibebahan'ny tena manokana amin'ny maha an'ny tena manokana ny famonjena;
ny fanarahana ny lala-marina (ortodoksia araka ny heviny protestanta): ny fahefan'ny Baiboly sy ny maha vokatry ny tsindrimandrin'Andriamanitra azy, ny fahamarinan-tandrifin'ny zavatra voalaza ao ary ny fiarovana ireo "fahamarina kristiana".
Ireo antokom-piangonana evanjelikaModifier
Ireto avy ireo sampana lehiben'ny Evanjelima: ny Batisma, ny Pentekotisma, ny fihetsiketsehana karismatika, ny fihetsiketsehana karismatika vaovao ary ny kristianisma tsy manavaka fiangonana.
Ny Batisma dia finoana kristiana evanjelika nipoitra tamin'ny Fifohazam-panahy notarihin'ilay pastora anglisy atao hoe John Smyth tao Holandy tamin'ny taona 1609. Io hetsika io dia miavaka noho ny fanomezany lanja ny Baiboly, ny fahateraham-baovao, ny batisan'ny olon-dehibe, ny toe-tsaina tia mamita iraka, ny fizakan-tena isan-toeran'ny fiangonana, ny fisarahan'ny Fiangonana sy ny Fanjakana ary ny fananan'ny fitambaran'ny mpiara-mivavaka rehetra fahefana (kongregasionalisma). Niisa 100 000 000 ny mpino batista tamin'ny taona 2010.
Ny Pentekotisma dia finoana kristiana vokatry ny Fifohazam-panahy notarihin'ny pastora amerikana Charles Fox Parham sy William Joseph Seymour tao Etazonia tamin'ny taona 1906. Indraindray izy dia tsy heverina ho isan'ny fiangonana evanjelika. Io fihetsiketsehana io dia manana izao toetra izao: manome lanja manokana ny Baiboly, ny fahateraham-baovao, ny batisan'ny Fanahy Masina, ny fanomezam-pahasoavan'ny Fanahy Masina, ny batisan'ny olon-dehibe (batisan'ny mino), ny fananana saina tia mamita iraka, ny fanokanan-tena ara-pitondran-tena amin'ny fiainana, ny fahaleovan-tenan'ny fiangonana isan-toerana, ny fisarahan'ny Fiangonana sy ny Fanjakana. Niisa any amin'ny 279 000 000 any ho any ny mpino pentekotista tamin'ny taona 2011 araka ny tarehimarika omen'ny Pew Research Center.
Ny Fihetsiketsehana karismatika ara-pilazantsaraModifier
Tamin'ireo taona 1960, taorian'ny fiantombohan'ny Fihetsiketsehana karismatika dia nisy fiangonana ara-pilazantsara nanapa-kevitra ny hanaraka ny zotran'ity fihetsiketsehana ity sy nihataka tamin'ny fifanarahana pentekotista. Manakaiky ny Pentekotisma ny Fihetsiketsehana karismatika evanjelika nefa tsy mihevitra ny fiteny tsy fantatra ho porofon'ny batisan'ny Fanahy Masina. Omeny lanja indray ireo fanomezam-pahasoavana isankarazany  . Tamin'ny taona 2011 dia niisa 305 000 000 ny mpanaraka io fihetsiketsehana io izay ahitana koa ireo ao amin'ny Fihetsiketsehana karismatika vaovao.
Ny Fihetsiketsehana karismatika vaovaoModifier
Ny kristianisma tsy manavaka fiangonanaModifier
Ny kristianisma tsy manavaka fiangonana dia fihetsiketsehana teolojika kristiana avanjelika izay ahitana fiangonana na fikambanana mpanao asa soa tsy miankina amin'ny fihetsiketsehan'ny Batisma na ny an'ny Pentekotisma . Tsy manana anarana raikitra iantsoana azy izy ireo   na dia manana ny fahaleovan-tenany aza. Ao amin'ireo atao hoe "megachurch" ("trano fiangonana goavambe") no ahitana azy ireo indrindra .
Ny Calvary Chapel ("Lasapelin'i Kalvary") dia fikambanana nivoaka avy amin'ny Fihetsiketsehana karismatika sady manana fiangonana miisa 1700 tamin'ny taona 2014. Ny Association of Vineyard Churches ("Fikambanan'ny fiangonan'ny tanim-boaloboka") dia fikambanam-piangonana evanjelika niala avy ao amin'ny Calvary Chapel sady manana fiangonana mihoatra ny 1500 eran-tany. Ny Association chrétienne pour la Francophonie dia fikambanam-piangonana mpanao asa soa miisa 26 (taona 2015) any Kanada sy Frantsa ary Haitý. Ahitana ny atao hoe Fiangonana evanjelika afaka (frantsay: Églises évangéliques libres) miisa 50 sady misy mpikambana 4000 koa izay nivoaka avy amin'ny Fiangonana nohavaozina ny ao Frantsa izay mitovitovy fomba amin'ny Batista nefa tsy manao ny batisa asitrika anaty rano ho fepetra ahafaha-mandray ny fanasan'ny Tompo na maha mpikambana. Ahitana io karazana fiangonana afaka io koa ny any Soisa sy Etazonia.
↑ Jereo: lecnef.org (tahiry).
↑ http://www.eglises.org/declaration/ (tahiry)
↑ http://reforme.net/une/monde/revolution-culturelle-mega-churches [tahiry]
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Evanjelisma&oldid=997567"
Dernière modification le 6 Oktobra 2020, à 11:12
Voaova farany tamin'ny 6 Oktobra 2020 amin'ny 11:12 ity pejy ity.